China Yakanaka mukurumbira extruded alloy 6061 6082 5083 2024 7075 round aluminium bar vagadziri uye vanotengesa | Huifeng
Tsanangudzo yealuminium bar
Kunze dhayamita: 10-260mm
Zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana zvesimbi zvirimo mumatanda ealuminium, tsvimbo dzealuminium dzinogona kuve dzakakamurwa kuita zvikamu zvisere, ndiko kuti, dzinogona kukamurwa muzvikamu gumi nepfumbamwe:
1. Iwo 1000 akateedzana aruminiyamu tsvimbo anomiririra iyo 1050, 1060, uye 1100 dzakateedzana. Mune ese akateedzana, iwo 1000 akateedzana ndeeye akateedzana ane akanyanya aruminiyamu zvemukati. Rucheno runogona kusvika kupfuura 99,00%. Nekuti haina zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi, maitiro ekugadzira ari nyore uye mutengo wacho wakachipa. Parizvino ndiyo yakanyanya kushandiswa dzakateerana mumaindasitiri akajairwa. Mazhinji ezvigadzirwa zvinotenderera mumusika ari 1050 uye 1060 akateedzana. Iwo 1000 akateedzana aruminiyamu tsvimbo anoona iwo mashoma aruminiyamu zvemukati akateedzana maererano nemaviri ekupedzisira manhamba echiArabhu Semuenzaniso, ekupedzisira maviri manhamba echiArabic e1050 akateedzana ari makumi mashanu. Zvinoenderana neyepasi rose zita rekutumidza zita, iyo aruminiyamu yezvinyorwa inofanirwa kusvika 99.5% kana kupfuura kuti ive chigadzirwa chakakodzera. nyika yangu yealuminium alloy technical tekinoroji (gB / T3880-2006) zvakare inotsanangura zvakajeka kuti aruminiyamu yezvinhu 1050 inosvika 99.5%. Saizvozvo, iyo aruminiyamu yezvinyorwa zve1060 akateedzana aruminiyamu matanda anofanirwa kusvika 99.6% kana kupfuura.
2. 2000 dzakateedzana aluminium tsvimbo dzinomiririra 2A16 (LY16) uye 2A02 (LY6). Iwo 2000 akateedzana aruminiyamu tsvimbo anozivikanwa neakanyanya kuomarara, aine akanyanya emukati emhangura, ayo ari anenge 3-5%. Iwo 2000 akateedzana aruminiyamu tsvimbo ndeyezvinhu zveaviation aluminium zvinhu, izvo zvisingawanzo kushandiswa mune zvakajairika maindasitiri.
2024 yakajairwa yakaoma yakaoma aluminium alloy mune iyo aluminium-mhangura-magnesium akateedzana. Iyo inopisa isingarapike chiwanikwa ine yakakwira simba, nyore kugadzirisa, kutendeuka kuri nyore, uye kwakawanda ngura kuramba.
Mushure mekurapa kwekupisa (T3, T4, T351), echimakanika zvivakwa zve2024 aruminiyamu matanda anovandudzwa zvakanyanya. Yayo T3 mamiriro parameter ndeaya anotevera: tensile simba 470MPa, 0.2% goho simba 325MPa, kukwirisa: 10%, kuneta simba 105MPa, kuomarara 120HB.
Iko kushandiswa kukuru kwe2024 aruminiyamu tsvimbo: chimiro chendege, ma rivets, materu evhiri erori, zvinofambisa zvinhu uye zvimwe zvakasiyana zvikamu zveakarongeka.
3. 3000 dzakateedzana aruminiyamu tsvimbo dzinomiririra 3003 uye 3A21. Iyo yekugadzira tekinoroji ye3000 akateedzana matanda ealuminium munyika yangu ari mashoma. 3000 dzakateedzana aruminiyamu tsvimbo dzakagadzirwa nemanganese sechinhu chikuru. Izvo zvirimo zviri pakati pe1.0-1.5, inova nhevedzano ine nani anti-ngura basa.
4. 4000 dzakateedzana aluminium tsvimbo Mumiriri ari 4A01 4000 akateedzana aruminiyamu matanda ndeakateedzana neakakwira silicon zvemukati. Kazhinji zvinyorwa zvesilicon zviri pakati pe4,5-6.0%. Izvo ndezvezvivakwa zvekuvaka, zvemuchina zvikamu, zvekugadzira zvinhu, zvekusimbisa zvinhu; yakadzika yakanyunguduka poindi, yakanaka ngura kuramba, chigadzirwa tsananguro: kupisa-kusagadzikana uye kupfeka kusagadzikana
5. Iwo 5000 akateedzana aruminiyamu matanda anomiririra iwo 5052, 5005, 5083, uye 5A05 akateedzana. Iwo mazana mashanu akateedzana aruminiyamu matanda ndeaya anowanzo shandiswa chiwanikwa chiaruminiyamu tsvimbo dzakateedzana, chikuru chinhu chinonzi magnesium, uye iyo yemagesium iri pakati pe3-5%. Inogona zvakare kunzi aluminium-magnesium alloy. Iwo makuru maficha akaderera kuwanda, yakasimba tensile simba uye yakakwirira kukwirisa. Munzvimbo imwe chete, huremu hwealuminium-magnesium alloy yakaderera pane mamwe akateedzana, uye zvakare inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akajairwa. Munyika yangu, iyo 5000 akateedzana aruminiyamu tsvimbo ndeimwe yeakakura aruminiyamu tsvimbo akateedzana.
6. 6000 dzakateedzana matanda ealuminium anomiririra 6061 uye 6063 kunyanya iine magnesium nesilicon. Naizvozvo, zvakanakira 4000 akateedzana uye 5000 akateedzana akaiswa mukati. 6061 inotonhora-inotorwa aruminiyamu yekugadzira chigadzirwa, inokodzera kunyorera ine yakanyanya kudikanwa yekumisa ngura uye oxidation. . Kushanda kwakanaka, kupfeka nyore, uye kugadzikana kwakanaka.
7. 7000 dzakateedzana aluminium tsvimbo dzinomiririra 7075 uye zvakanyanya zvine zinc. Izvo zvakare ndeyenzvimbo yekuvhiya nhevedzano. Iyo aluminium-magnesium-zinc-mhangura chiwanikwa, inopisa-inorapika chiwanikwa, uye super-yakaoma aluminium alloy ine yakanaka yekupfeka kuramba. Izvo zvinoenderana nekutenga, uye nyika yangu tekinoroji yekugadzira inoda kuvandudzwa.
8. 8000 akateedzera aruminiyamu tsvimbo Iyo inowanzo shandiswa 8011 ndeyemamwe akateedzana, uye mazhinji mafomu acho aruminiyamu foil, iyo isingawanzo kushandiswa mukugadzira kwealuminium tsvimbo.
Pashure: China fekitori 5052 PVDF ruvara rwakafukidzwa aruminiyamu coil ukobvu 0.7mm
Zvadaro: 6061 6063 7075 Aluminium Pipe / Aluminium Tube
Aluminum chiwanikwa Tsvimbo
Aluminium Round Tsvimbo
Aluminium Square Tsvimbo
Anodized Aluminium Tsvimbo
Bhara Aluminium Wire
Yakawedzeredzwa Aluminium Mabhawa
Hollow Aluminium Tsvimbo
s Aluminium Inowedzera Bhawa
Solid Aluminium Tsvimbo
Mutete Aluminium Rod
Mhando dzeAluminium Mabhawa